INAA LILAAHI WA INAA ILAAHI RAAJACUUN: Marxuum Amb: Maxamed Sheekh Xasan
19 May, 2018 in by BANA Mogdishu Office
INAA LILAAHI WA INAA ILAAHI RAAJACUUN: Waxaa maanta ku geeryooday magaaladda Dubai/UAE Marxuum Amb. Muxammad Sheikh Xasan (Tuni). Ku dhashay magaalada Afgooye.
Wuxuu ahaa nin taariikh dheer ku leh waddanka Soomaaliya, jagooyin badan soo qabtay dalka Somaaliya kana mid ahaa safiiradii ugu horeeyay dalka Soomaaliya.
Adeer Mohamed wuxuu waxku soo bartay dalka Talyaniga kama mid ahaa dhalintii ugu horeeysay ee loo soo tababaro dhanka diplomacidda 1954. Wuxuu ka mid ahaa Danjire-yaashii ugu horreyey la magacaabay markii dalka xorriyad qaatay 1960kii . Dalal badan ayuu Soomaaliya wakiiil ama safiir ugu soo noqday sida Roma iyo London.
Wuxuu kaloo ahaa la taliyaha arimaha dibada Madaxwayne Aden Osman Cade iyo madaxdii kale ee ka dambeeysay ee dalka xukumeeysay.
Amb. Mohamed Sheikh Hassan, markii uu xukunka la wareegeen ciidankii xooga dalka codsi ka yimid madaxwaynaha UAE Sheikh Zaid bin Sultaan Al-Nahyaan wuxuu ka codsaday marxuun Madaxwayne Mahamed Siyaad Bare in uu la wareego Amb. Mohamed Sheikh Hassan Tuni si uu u noqdo la taliyaha boqorka Abu Dhabi dhanka diplomasiyadda asagoo noqday La-taye Dawladda Imaaraadka, gaar ahaan wuxuu ahaa lataliya Sheikh Zayed arimaha dibadda. Maadaama ay ahayd waagaas Emaratiga dowlad cusub oo aan lahayn aqoonyahano ku filan.
Sanadihii ugu dambeeyey wuxuu ku noolaa Imaaradka Carabta. Ayadoo Dawladda Imaraadka gelisay diwaanka hawl-gabka (Pensioner). Wuxuu ahaa adeer Amb. Mohamed xaafidul Qur’aan. Kuna hadka luuqado badan. Wuxuu ahaa marxuunka diplomasiyiintii Soomaalida ugu waaweynad.
Allah u naxriisto, dembigiisa dhaafo, kana waraabiyo janatul Fardowsa. Samir iyo imaan Allah ka siiyo qoyskiisa, qaraabadiisa, asxaabtiisa oo dhan.
Wuxuu ahaa qof sharaf iyo mudnaan ku leh dalka Soomaaliya, taas awgeed waxaan u tacsiyeeynayaa guud ahaan umadda Soomaaliyeed. Allaahuma Aameen...
Xasan Sheekh oo saakay Hoygiisa ku booqday Ugaas Khaliif
Xasan Sheekh Max'ud iyo Baaq uu DF u diray
Xasan Sheekh & C/qaadir Cosoble oo Ololihii Mucaaradnimada Dowladda u yeelay weji kale
qodob oo suurtagal ah in ay ku heshiiyeen Xasan, CC SHAKUUR iyo Cosoble
Xasan Sheekh oo Diiday inuu ka qeyb galo Xal u raadinta Mooshinka Farmaajo
Wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweyne Farmaajo oo talyaaniga ku wajahan
Booliska Australia oo sheegay in Xasan Khaliif uu doonayay in uu is qarxiyo
the background of the new autonomy president Visits: 667224
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 42458
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38174
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 33269
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28106
Maamulka KGS oo Wada Qorsho Lag Dilayo Siyaasi Yuusuf Hasan Mursal Visits: 39
Wendi Eritrea Ah oo Hargeysa Gaarey Visits: 5
Weerar Khasaaro geestay oo ka dhacay magaalo kutaala dalka Holland Visits: 9
i Arka i Arka I Qariya I Qariya Ayaa Ka Dambeyso Visits: 300
Roobow oo Xog cusub kasoo Bandhigay Amniga Muqdisho oo sii xumaanaya Visits: 238